Indlu yabalobi 100m ukusuka elwandle 011016-LT-0569
Iflethi eqeshisayo yonke sinombuki zindwendwe onguFrancesco
Indlu yomlobi yindlu encinci kwaye eneempawu kwidolophana endala. Imalunga nama-500 eminyaka ubudala.
Indlu iye yahlaziywa nazo zonke ii-conforts zanamhlanje ezigcina isitayile sayo sakudala.
Zama amava awodwa ukuze uphile kwi-mension yakudala!
Indlu yabalobi yindlu encinci kwaye eneempawu kwidolophu endala. Imalunga nama-500 eminyaka ubudala.
Indlu iye yahlaziywa kwaye inabo bonke ubuntofontofo bale mihla ngokuhambelana nesitayela sakudala.
Zama amava awodwa okuphila kwindlu yakudala!
Nika ingqalelo, ngenxa ye-covid kunokubakho imida kwezinye iilwandle zasimahla. Ukufikelela kulwandle oluthile, amatye kunye nolwandle luhlala lunokwenzeka.
Qaphela, kwi-covid kunokubakho imida kwezinye iilwandle zasimahla. Ukufikelela kwezinye iilwandle, amatye kunye nolwandle kuhlala kunokwenzeka.
Indlu isandula ukulungiswa ijonge ukulingana phakathi kwembali kunye nokusebenza. Iisilingi eziphantsi ezinemiqadi eveziweyo kunye nempahla yangaphambili ye-wicker inika inkangeleko efudumeleyo neyokudala edityaniswa nempahla yanamhlanje ekhitshini, izibuko zokunika ubunzulu kunye nezixhobo zanamhlanje ukuze unganikezeli kubutofotofo ngeeholide.
Nikelani ingqalelo, ukuba ude kune-1,85 m unokufumanisa ukuba ishawari incinci kakhulu, oku kungenxa yesakhiwo esidala, nceda ucinge ngalo mbandela!
Endlini kukho i-wifi kodwa isekwe kwi-sim router ngesantya esilinganiselweyo.
Indlu ixhotyiswe nge-microwave, oomabonakude ababini, umatshini wokuhlamba onesomisi, umatshini wokuhlamba izitya kunye ne-air conditioning ukongeza kwezinye izixhobo. Indlu inokufikelela ngokuzimeleyo kwaye ixhotyiswe ngebhokisi yangaphandle edityanisiweyo ukuvumela ukuba ungene kwaye uzikhangelele ngaphandle ngebheji yombane ekuvumela ukuba wondle indlu yonke nge-elektroniki.
Endlini uya kufumana yonke into, amashiti, iitawuli, iisepha kwindawo yokuhlambela, ekhitshini nakumatshini wokuhlamba uqukiwe.
Irhafu yabakhenkethi ibandakanyiwe kwintlawulo. Ndiza kukuhlawulela irhafu yabakhenkethi, irhafu yabakhenkethi inyanzelekile ngokomthetho, kodwa andifuni ukuphazamisa iindwendwe ngezicelo ezicaphukisayo zemali. Ayisositayile sam. Ukuba ubhukisha apha, yonke into ibandakanyiwe. Ayimangalisi loo nto! Ah, oku akwenzeki kwesinye isibhengezo.
Ukusuka kwindlu kunokwenzeka ukuba ujabulele ulwandle ukusuka elunxwemeni olusondeleyo, tyelela iSan Terenzo kunye neLerici kwaye emva koko u tyelele indawo ejikelezileyo, iTellaro, iLe Cinque Terre, iPortovenere, iSarzana neLa Spezia.
Ngaba ungathanda isaphulelo esikhethekileyo sokuhlala ixesha elide? Ndibhalele nje!
Qaphela: kwinkcazo yentengiso uya kufumanisa ukuba kukho iindleko zokucoca, zibalwa kwixabiso elipheleleyo le-Airbnb kwaye sele lihlawulwe, ngoko awuyi kuba nazo naziphi na ezongezelelweyo. Citra 011016-LT-0569.
Indlu isandula ukulungiswa ijonge ukulingana phakathi kwembali kunye nokusebenza. Iisilingi eziphantsi ezinemiqadi eveziweyo kunye nefenitshala ye-wicker yasekuqaleni inika inkangeleko efudumeleyo kunye ne-retro ejikelezwe yimpahla yanamhlanje ekhitshini, izibuko ukunika ubunzulu kunye nezixhobo zale mihla ukuze ungancami ukukhululeka. Indlu ixhotyiswe nge-microwave, oomabonakude ababini, umatshini wokuhlamba owomileyo, umatshini wokuhlamba izitya kunye ne-air conditioning phakathi kwezinye izixhobo. Indlu inokufikelela ngokuzimeleyo kwaye ixhotyiswe ngebhokisi yangaphandle edityanisiweyo ukuvumela ukuba ungene kwaye uzikhangelele ngaphandle ngebheji ye-elektroniki ekuvumela ukuba unike amandla indlu yonke.
Qaphela, ukuba umde kune-1,85m unokuxinana kwishawari, oku kungenxa yesakhiwo sakudala, nceda uqwalasele lo mba.
Indlu ine-sim based wifi, isantya sinokukhawulwa.
Endlini uya kufumana yonke into, amashiti, iitawuli, iisepha kwindawo yokuhlambela ekhitshini nakumatshini wokuhlamba uqukiwe.
Irhafu yabakhenkethi ibandakanyiwe.
Ndiya kukuhlawulela irhafu yabakhenkethi, enyanzelekileyo ngumthetho, kuba andifuni ukuphazamisa iindwendwe ngezicelo ezicasulayo zemali. Ayisiso isimbo sam. Ukuba ubhukisha apha yonke into ibandakanyiwe. Ayimangalisi loo nto! Ah, akunjalo kwezinye iintengiso.
Ukusuka kwindlu kunokwenzeka ukuya elwandle ukusuka elunxwemeni olusondeleyo, tyelela iSan Terenzo kunye neLerici kwaye emva koko uvakashele indawo engqongileyo, iTellaro, iCinque Terre, iPortovenere, iSarzana neLa Spezia.
Ngaba ungathanda isaphulelo esikhethekileyo sokuhlala ixesha elide? Ndibhalele!
Qaphela: kwinkcazo yoluhlu uya kufumanisa ukuba kukho imali yokucoca, ibalwa kwixabiso lilonke le-Airbnb kwaye sele lihlawulwe, ngoko awuyi kuba nazo naziphi na ezongezelelweyo. Citra 011016-LT-0569 - -> fac3b8k.
4.96 ·Izimvo eziyi-51
4.96 · Izimvo eziyi-51
Inqaba yakudala yaseSan Terenzo ibonakala ikhusela uxolo lwezindlu zakudala kunye nemibalabala ezijonge ulwandle lweGulf of Poet. Umtsalane wakudala yimvelaphi yokuphila okuzolileyo okwenziwe ngolwandle, iilwandle, iindawo zokutyela kunye neevenkile. Ukuhamba ecaleni kwebhayi ungahamba ngokukhuselekileyo kwaye ufike eLerici malunga nesiqingatha seyure. Unokukonwabela ubuhle bolwandle, izikhephe ezidadayo ngokuthe nkqi, ilali enemibala yamandulo ukuya kuthi ga kwinqaba ezukileyo emva kwayo unokujika ujonge kulwandle oluvulekileyo.
Inqaba yakudala yaseSan Terenzo ibonakala ngathi yongamela uxolo lwezindlu zamandulo ezijongene nolwandle olunemibala yeGulf of Poet. umtsalane wakudala yimvelaphi yolonwabo oluzolileyo olwenziwe ngolwandle, iilwandle, iindawo zokutyela kunye neevenkile. ngeenyawo ecaleni kwe-bay Unokuhamba ngokukhuselekileyo kwaye ufikelele eLerici malunga nesiqingatha seyure. Unokukonwabela ubuhle bolwandle, izikhephe ezidadayo ngokuthe nkqi, ilali enemibala yamandulo ukuya kuthi ga kwinqaba ezukileyo emva kwayo unokujika ujonge kulwandle oluvulekileyo.
L'ancien château de San Terenzo semble garder l'agglomération paisible de maisons anciennes qui surplombent la mer du Golfe des Poètes colorés. le charme antique est le fond d'une vivacité sereine faite de mer, de plages, de restaurants et de boutiques. Ndiya kuphawula ubude beebheyi Vous pouvez macher en toute security et attindre Lerici en une demi-heure environ. Vous pouvez profiter de la beauté de la mer, des bateaux qui flottent tranquillement, de ancien village coloré jusqu'au majestueux château derrière lequel vous pouvez tourner votre vers la mer.
Ndihlala kwimizuzu eyi-10 ukusuka endlwini kwaye ndinokuxhasa ngokukhawuleza iindwendwe ukuba ziyimfuneko. Ndizakufumaneka ngoWhatsapp (okhethwayo), ngefowuni, nge-sms, nge-imeyile. Ndingakuvuyela ukunceda nokuxhasa iindwendwe.
Ndihlala imizuzu eyi-10 ukusuka endlwini kwaye ndinokuxhasa iindwendwe ngokukhawuleza ukuba kuyimfuneko. Ndiza kufumaneka ngoWhatsApp (okhethwayo), ngefowuni, nge-sms, nge-imeyile. Ndingakuvuyela ukunceda nokuxhasa iindwendwe.
Uza kuchitha imizuzu eli-10 ukuya kwindawo yokuhlala kunye ne-peux immediatement soutenir les izimemo ozifunayo. Inokujoyinwa kwi-WhatsApp (préféré), nge-téléphone, nge-sms, nge-imeyile. Je serai heureux d'aider et de soutenir les invités.
Ndihlala kwimizuzu eyi-10 ukusuka endlwini kwaye ndinokuxhasa ngokukhawuleza iindwendwe ukuba ziyimfuneko. Ndizakufumaneka ngoWhatsapp (okhethwayo), ngefowuni, nge-sms, nge-imeyile…
Inombolo yomthetho: 011016-LT-0569
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Lerici